Arrinta horseeday heshiiska Farmaajo iyo R/W Rooble | Dalkaan.com
Home Warkii Arrinta horseeday heshiiska Farmaajo iyo R/W Rooble
Arrinta horseeday heshiiska Farmaajo iyo R/W Rooble
Muqdisho (dalkaan) – Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay heshiis ka gaaray khilaafkii u dhaxeeyay, sida uu shaaciyey xafiiska ra’iisul wasaaraha.
Qodobada heshiiska ayaa waxaa ka muuqda inuu tanaasulay ra’iisul wasaare Rooble, isaga oo ogolaaday in meesha laga saaro taliyihii hay’adda NISA ee uu magacaabay, oo aheyd xudunta khilaafka labada mas’uul.
Heshiiska ayaa waxaa sidoo kale qeyb ka ah in kiiska Ikraan Tahliil loo daayo hay’adaha cadaaladda, hase yeeshee waxaa hay’adda NISA baaqi kusii ah qaar ka mid ah dadkii kiiska lagu tuhmayey, taasi oo shaki gelineysa inay caddaalad heli karaan qoyskeeda.
Haddaba, Maxaa soo da-dajiyey heshiiska Rooble iyo Farmajo?
Maxamed Cabdi Cumar oo ah bare ka tirsan Jaamacadda Muqdisho, islamarkaana falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiskaas uu ku yimid cadaadis badan oo laba dhinac ka socday, mid waqtigu keenay iyo cadaadis kale oo bannaanka ka yimid.
“Sababta keentay inay heshiiyaan waxaa keenay cadaadis badan oo laba dhinac ka socday, mid waqtigu keenay iyo cadaadis kale oo bannaanka ka imaanaya sida Maraykanka, waddamo kale, iyo ururro waaweyn oo cadaadis ku saaray in khilaafka la soo afjar,” ayuu yiri Maxamed Cabdi Cumar.
Sidoo kale waxaa la rumeysan yahay inay qeyb ka tahay culeysyada horseeday heshiiska labada nin arrimaha doorashooyinka iyo dardar-gelintooda.
Khilaafka Rooble iyo Farmaajo ayaa intii uu taagna waxa uu saameyn ku yeeshay wada-shaqeynta labada xafiis, warbaahinta dowladda iyo goobo kale oo muhiim ah.
Previous articleMarcus Rashford oo ku Rajo Weyn inuu Qeyb ka Noqdo Kulanka Liverpool
Shirka Jaraa’id ee Arteta ka hor kulanka Liverpool, isagoo kaga hadlay...
dalkaan_2ujpzr - November 19, 2021 0
Macalinka kooxda Arsenal ayaa shir jaraa’id kaga hadlay kulanka kooxdiisa ay booqashada ugu tageyso kooxda Liverpool kulan ka tirsan Premier league-ga. Arteta ayaa ku...
Jadwalka doorasho ee 9 ka mid ah kuraasta GOLAHA SHACABKA oo...
Musharaxiinta madaxweyne oo beelahooda weydiistay kuraas xildhibaan + Sababta
Wiilka Mucamar Qadafi oo madaxweyne ka noqon kara Libya sanado kadib...
Cristiano Ronaldo oo Weerar Afka ku Qaaday Tifaftiraha France Football iyo...